Home AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ ASIAN Fyodor Smolov Child Story Plus Ihe na-adịghị agbanwe akụkọ ihe mere eme
LB na-egosi Full Story of a Russian Football Genius onye kasị mara aha; "Fedor". Ụmụaka anyị na-amụ nwa na-agba ume akụkọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-ezighị ezi Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Ntugharia ya bu ihe omuma nke ndu ya tupu ama aha, ndu ezinulo na otutu ihe di iche iche banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na Fyodor agbatawo ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ ya n'ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole maara banyere Fyodor Smolov's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Fyodor Smolov Nwa Akụkọ Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu -Ndụ mbido
Fyodor Mikhaylovich Smolov mụrụ na 9th nke February 1990 na nne ya, Irina Smolova na nna, Mikhail Smolov na Saratov, Southwestern Russia. A mụrụ ya dịka nwa na nwa nke nwa ya.
Dịka nwatakịrị, ezinụlọ Fyodor biri n'ógbè ndị na-eme ihe ọjọọ nke obodo ndị dị na Russia na Saratov. Nke a mere ka nne na nna ya nwee ọtụtụ ụzọ ichebe nwa ha nwoke site na mmetụta ọjọọ nke ụmụ nwoke ahụ. N'ebe ndị ọzọ iji zere nwa ya na ndị enyi ọjọọ na-akpakọ, nna ya Mikhail wee kpọrọ Fyodor gaa na bọl bọlbụ obodo ha, Sokol maka ndebanye aha ya. N'ụzọ dị mwute, Fyodor Smolov abụghị onye na-akwado ụlọ ịgba bọl obodo ya (Sokol Saratov) ebe nna ya mere ka ọ malite ọrụ ntorobịa ya. Obi ya dị "Lokomotiv Moscow" emi odude ke Russia isi obodo. Nke a bụ ebe ọ na-arọ nrọ ịmalite ọrụ ya.
Ọ rọrọ na ọ ga-abụ onye òtù ọgbakọ ahụ otu ụbọchị. N'ịmara na enweghị ego iji mee ka nke a mee, Fyodor Smolov nọgidere na ụlọ ọrụ ọ na-akwadoghị. Mkpebi nna ya nwere mmetụta dị njọ na ọganihu ya na-eto eto.
Fyodor Smolov na-agbasi mbọ ike ịnagide bọlbụ ntorobịa. Ọbụna o mechara nyochaa football ya na 14. Nke a bụ oge nna ya malitere iche na nwa ya dị afọ iri na ụma ejidere egwuregwu ahụ. Nna ya kwusiri ike na nwa ya nwoke kwesịrị ịgbale nyocha nke ikpeazụ a, site na ụlọ ọrụ ọzọ. Mikhail kwubiri na nwa ya nwoke ga-akwụsị bọl ma ọ bụrụ na ọ gaghị enwe ọganihu n'ule nke anọ na-abịa.
Ọ dabara nke ọma, Fyodor weputara nyocha ahụ site na ụlọ ọrụ ndị isi na bọlbụ Master Saturn site na Yegoryevsk, mpaghara Moscow. Ha ji obi ụtọ kweta na nwa okoro ahụ na-ekwe nkwa na Fyodor nọgidere na-ama nkà ya n'egwuregwu kachasị amasị ya. N'ikpeazụ, ọ kwụsịrị ọrụ ntorobịa ya na Saturn Moscow ebe ọ na-egwuri egwu n'etiti 2006 na 2007.
Na 16, Fyodor Smolov bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ na Dinamo Moscow. N'oge a, o nwere mkpebi siri ike iji mee ka nrọ ya mezuo, ọchịchọ ya ịghọ ihe mgbaru ọsọ na-echere abụghị nanị ihe na-agafe agafe. N'ihe gbasara oru oru ya, tọ na-ezu ike, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Fyodor Smolov Nwa Akụkọ Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị agbụrụ na-aga nke ọma n'asụsụ Russian, e nwere nwunye na-adọrọ adọrọ, egwuregwu ma ọ bụ enyi nwanyị. Obi abụọ adịghị ya, ike Fyodor nwere ikike, yana ụzọ ndụ ya site na pitch na-ewuli ya elu zuru ezu.
Na 2012, o zutere onye na-eme ihe nkiri Russia na onye nlekọta TV, Victoria Lopyreva na otu onye otu ya (Yuri Zhirkov's) ụbọchị ọmụmụ. N'ikpe ikpe mara mma, ọ dị mkpa ikwu na Victoria bụ onye mmeri nke Miss Russia 2003.
Ihe ọzọ dị mkpa ị ga-ahụ bụ na; Victoria Lopyreva bụ afọ 7 karịa nwoke ya. Otú ọ dị, eziokwu a egbochighị mmekọrịta ha na-enwe mmekọrịta siri ike site n'inwelite na ihe ka mkpa, nkwenye alụmdi na nwunye bụ nke mere n'otu ihe pụrụ iche [enweghị mgbanaka] ịke. Na Disemba 2013, lovebirds; Lopyreva na Fyodor nwere agbamakwụkwọ mara mma na nke ihunanya na ndị Maldives. Alụmdi na nwunye ha dị naanị afọ abụọ tupu ha agbasaa. Otu abụọ ahụ kwụsịrị ịkparịta ụka na July 2016.
Ezigbo ihe mere ha ji agba alụkwaghịm dị n'okpuru ebe a dị na Fyodor Smolov Family Facts dị ka nkọwa Fyodor si kọwaa. Otú ọ dị, mgbasa ozi Russia na-akọ na ịgba alụkwaghịm ahụ bịara dị ka Fyodor Smolov nọ na-anụ akụkọ ka ọ na-ahụ Miranda Shelia, ihe atụ ndị ọzọ Russia bụ ndị e sere n'okpuru.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na Miranda (nke dị n'elu) na-atụlekarị ya Irina Shayk, ihe atụ ọzọ mara mma nke na-adịbu Cristiano Ronaldo 'onye hụrụ n'anya. Mgbe emezighị emezi Russia na 2016 UEFA European Championship, Fyodor mebiri enyi ya nwanyị Miranda Shelia.
Ọzọkwa, na 2016 na-ada, mgbasa ozi Russia na-akọ na oke oke rat malitere ịlụ Sofia Nikitchuk onye bụ 2015 Miss Russia onye mmeri.
Fyodor Smolov Nwa Akụkọ Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu -Ihe Ezinụlọ
Nne: Irina Smolova nke dị n'okpuru ya na nwa ya ọ hụrụ n'anya bụ nne Fyodor.
Nne Fedor Smolov buru ụzọ kwuo n'ihu ọha banyere ịgba alụkwaghịm nke nwa ya nwoke na onye ngosi TV na Victoria Lopyreva. O kwetara na nwunye nwa ya gbajiri obi ya nke were otutu oge ya na-elezi anya oru ya, obughi di ya na obi ya.
Irina kwuru na ihe egwu na ihe nlereanya dị iche iche esitewo na mwepu mgbu. Ya na Victoria nwere mmekọrịta chiri anya, nwunye nwanyị ahụ na-akpọkwa ya aha nne. N'okwu ya ...
"N'afọ atọ ha nọkọtara, mụ na ya dị n'ezigbo mma, ọ na-emetụ m aka ma na-agba m ụtọ, mgbe ọ kpọrọ mama m. Mụ na Vika na-ekwurịta okwu n'ụzọ zuru oke ugbu a ".
"Enweghị m ike ịsị, n'ezie, mana ma ọ bụ na ha enweghị ike ịzọpụta mmekọrịta ha. Ọ na-esiri m ike ịhụ na ọ hụrụ ya n'anya. Ma eleghị anya, n'oge ụfọdụ, anya na-arụ ọrụ ọjọọ.
Mgbe Fyodor na-azụ ọzụzụ na ogige ọzụzụ, Victoria na-arụsi ọrụ ike - ọ bụ onye ngosi TV na ụdị ejiji, ọ na-enwe ọganihu, n'ogo dị elu na ọrụ ya chọrọ mgbalị dị ukwuu. Ebe, ọ na-apụta, ọ bụ enweghị oge maka Fyodor. Ọ bụ onye na-ahụ nkasi obi ụlọ, anya. Ikekwe nke ahụ mere nwa agbọghọ nke kpebiri ịnọnyere ya, ga-adabara ya ".
ka Irina Smolova (nne Fyodor Smolov) kwuru.
Fyodor Smolov Nwa Akụkọ Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu -Ezigbo Ndụ Onye
Fyodor Smolov mmasị tattoos. Onye egwuregwu ahụ nwere egbugbu mbụ ya na 17 ma ugbu a, ọ pụghị ikwu ọtụtụ tattoos o nwere. Aka ya niile na-ejide onwe ya ma na-etolite otu ihe osise dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru.
Ọ na-akwado AC Milan kemgbe oge 1997 / 98 na otu e hotara George Weah na Andriy Shevchenko dị ka nwata kachasị amasị ya.
Nsogbu nke Fyodor: Ọ na-agba ọsọ site na mmetụta uche. N'ikwu nke a, o nwere ike iwe iwe, na-adịghị mma ma ọ bụghị enyi.
Ihe Fyodor achọghị: Ọ na-achọ ka nkwa ndị ahụ mebiri emebi, na-anọ naanị ya, ndị na-adịghị mma ma ọ bụ ndị na-agwụ ike, ndị na-ekweghị na ya.
Ụjọ kachasị nke Fyodor bụ ịhụ na ya dị oke oke ma ọ bụ na-egbochi ya. Nke a na-eme ka ọ dị jụụ ma na-enweghị isi. Otú ọ dị, ọ nwere usoro nchebe megide mmekọrịta chiri anya. Fyodor kwesịrị ịmụta otú e si atụkwasị ụmụ nwanyị obi, nakwa igosipụta mmetụta ya n'ụzọ dị mma.
Onye na-egwu bọl na-enwekwa obi ụtọ ịgụ akwụkwọ akụkọ nke ọma site n'oge ọ bụ nwata dị ka e sere n'okpuru.
Ihe nchọpụta nke Criminal a la Mario Puzo na Arturo Pérez-Reverte, akwụkwọ Fyodor Dostoevsky, na ọrụ Mikhail Bulgakov bụ akwụkwọ ya kacha amasị.
Fyodor Smolov Nwa Akụkọ Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ Eziokwu -Enweghị obi ụtọ na nnukwu kọlụm nke Europe
N'okwu dị mwute, Fyodor Smolov agwa Max Online na ndị isi mba ọzọ na-eche mgbe ọ bụla ịchọrọ ndị Russia si na Russia. N'okwu ya ...
Njikọ ndị Njikọ na Njikọ na-agaghị aga n'ụzọ iji kpọbata anyị. M hụrụ ya n'oge windo mbufe. Enwere m ụfọdụ onyinye, ma ha niile nwere ego maka ikike ịzụta ihe. Ụlọ klọb dị na Europe na-ewere anyị dị ka ndị na-eme mkpesa na ndị a nabatara.
Smolov kwukwara na e nwere ụfọdụ stereotype na Europe mgbe ọ na-abịakwute ndị Russia.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Fyodor Smolov nwa ya na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Bọchị edoziri: July 22, 2018
Bọchị agbanweela: Septemba 23, 2018